Af-soomaali | Somali | Somali - Oslo kommune
Oslo City Government introduces stricter coronavirus restrictions
Mon March 1, kl 13:25
Af-soomaali | Somali | Somali
Xeerarka koroonaha ee Oslo
Xannaanooyinka carruuraha iyo dugsiyada hoose/dhexe waa furan yihiin. Waalidka iyo ardayda dugsiyadooda ayaa ku wargelinaya wakhtiyada furitaanka. Waa muhiim in ay carruurtu dugsiga tagaan si ay u helaan waxbarashada ay u baahan yihiin. Waxaa laga yaabaa in uu dugsiga ilmahaagu leeyahay xeerar u gaar ah.
Carruurta iyo dhallinyarada ka yar 20 sano waa loo ogool yahay firfircoonida la qabto wakhtiga firaaqada la yahay sida kubbadda cagta, kubbadda gacanta, kooxaha heesaha iyo muusigga [kor og korps].
Dugsiyada sare waxbarashada inteeda badan guriga ayaa hadda lagu qaadanayaa.
Dukaammada aan ku jirin kuwa la oggol yahay in ay furnaadaan, waa in ay xirnaadaan. Waa la oggol yahay in macaamiisha loo sameeyo nidaam ay badeecada uga qaadanayaan dukaanka dibeddiisa.
Waa in la xiraa dhammaan makhaayadaha. Take-away waa la oggol yahay.
Maktabaduhu weli waa furan yihiin.
Goobaha cibaadadu waa furan yihiin. Salaadaha lama oggola, marka laga reebo aaska oo la oggol yahay ilaa iyo 50 qof. Lama oggola in tacsi laysugu yimaado aaska kaddib.
Goobaha jimicsigu waa xirnaanayaan. Waxaa la oggol yahay tababbarka iyo baxnaaninta lagu soo kabsanayo ee qof gaar ah loo fidinayo.
Isku day in aadan raacin gaadiidka dadweynaha.
Guriga ha ku shaqeeyo qofki ay taasi suurtaggal u tahay.
Gafuur-xir gasho markaad joogto meel gurigaaga ka baxsan oo ay adag tahay in aad dadka ka fogaato oo aad 1 mitir u jirsato.
Xeerarkii qabanqaabooyinka lagu mamnuucayay weli waa sidoodii.
Waa la oggol yahay in lagu soo booqdo, laakiin lama oggola in ay dad 10 qof ka badan isugu yimaadaan guryaha barayfatka ah, waana in ay kulligood 1 mitir isu jirsan karaan. Ardaagga iyo jirdiinooyinkuna waa sidaas oo kale.
Guriga joog haddii aad xanuunsan tahay, gacmaha si fiican isaga dhaq, oo is baar haddii aad astaamo isku aragto.
Ogow in uu baaritaanku bilaash yahay.
Qabanqaabooyinka iyo isu imaatinnada barayfatka ah
Qabanqaabooyinka dibedda ka dhaca
Isu imaatinnada barayfatka ah waa qabanqaabooyin dibedda ka dhaca, waxaana la oggol yahay in ay markiiba joogi karaan 10 qof oo keliya.
Qabanqaabooyinka gudaha ka dhaca intooda badan waa la mamnuucay, laakiin waxyaalo la oggol yahay ayaa jira:
Aaska oo ay joogi karaan dad 50 qof ka yar. Dhammaan dadka aan isla deggenayn waa in ay isu jirsadaan masaafo 1 mitir ah.
Dadweynuhu ma imaanayaan ciyaaraha, tartammada, bandhigyada iyo qabanqaabooyinka la midka ah ee ay xirfadlayaashu ka qaybqaadanayaan.
Dad korjoogto ah ma imaanayaan nikaaxa, walqalka masiixiga iyo caadooyinka la mid ah.
Qabanqaabooyinka yaryar ee dhigitaalka ah ee ay joogaan dad ka yar shan qof, oo aysan ku jirin hawlwadeennada qabanqaabada. Dhammaan waa in la kala fogaado oo 1 mitir laysu jirsadaa.
Isu imaatinnada barayfatka ah ee ka dhaca guriga, gudaha iyo dibedda
Waa mamnuuc in ay wax 10 qof ka badan hal mar goobjoog ahaadaan, waxaana layskula taliyaa in laga fogaado isu imaatinka iyo booqashada. Waa in ay dhammaan dadku kala fogaan karaan oo isu jirsan karaan masaafo 1 mitir ah.
Karantiil – haddii aad u dhowaatay qof cudurka qaba ama aad dibedda tagtay
10 maalmood ayaad karantiil galeysaa haddii aad u dhowaatay qof cudurka qaba ama aad dibedda tagtay.
Haddii aad astaamo isku aragto waa in aad koroone iska baartaa.
Waa in aad karantiilka ku jirtaa xataa haddii baaritaanku sheego in aadan cudurka qabin. Dadka kula deggan uma baahna in ay karantiil galaan.
10-kaas maalmood looma baahna in aad:
aaddo dugsi, shaqo, lagu soo booqdo ama aad adigu dad kale booqato
raacdo bas, t-bane ama tiriig
Waxaa laguu oggol yahay:
in aad soo luga baxsato keligaa ama ayadoo ay kula socdaan dadka kula deggan. Haddii ay dantu kugu khasabto dukaanka waa aadi kartaa, laakiin waxaa ugu fiican in uu qof kale kuu soo adeego.
Inta aad karantiilka ku jirto haddii aad isku aragto qufac ama astaamo hargab, markaas gooni ayaad isu soocaysaa koroonahana waa lagaa baarayaa.
Gooni isu soocid – haddii aad cudurka qabto ama lagugu arko astaamihi koroonaha
Marka aad ku jirto gooni isu soocid looma baahna in aad qof kale u dhowaato. Xataa qoyskaaga uma dhowaanaysid.
Qolkaaga ku ekow. Musqusha shukummaan kuu gooni ah ku isticmaal.
Haddii aysan suurtaggal kuu ahayn in aad guriga gooni isugu soocdo, la xiriir xaafadda aad deggan tahay taas ayaa kaa caawin doonta in laguu helo meel ku habboon in aad gooni isugu soocdo e.
Haddaad aad u xanuunsato la xiriir dhakhtarkaaga joogtada ah, ama dhakhtarka kaltanka leh ka wac 116 117. Haddii uu jiro xanuun ay naftu khatar ku jirto, wac 113.
Baaritaanka koroonuhu oo bilaash ah
Waa in aad is baartaa haddii aad:
ay kaa lumaan dhadhanka- iyo urka
aad u dhowaatay dad uu koroone ku dhacay.
Baaritaanka koroonuhu had iyo jeer waa bilaash.
Baaritaanka koroonaha waxaad ka ballansanaysaa dhakhtarkaaga joogtada ah ama bogga internetka ee degmada oslo.kommune.no, ama telefoonka koroonaha ee degmada, 21 80 21 82.
Afkaaga hooyo ayaa lagugu caawin karaa markaad telefoonka koroonaha wacdo.
Si aad baaritaanka koroonaha uga ballansato bogga internetka ee degmada (waa afnorwiiji iyo afingiriis oo keliya) waxaad u baahan tahay BankID ama MinID.
Jawaabta baaritaanka koroonaha
Haddii uu baaritaanku sheego in aad koroone qabto telefoon ayaa laguu soo dirayaa.
Haddii lagula soo xiriiri waayo, waa in aad gashaa bogga helsenorge.no (wuxuu u baahan yahay BankID ama MinID) ama waa in aad wacdaa telefoonka koroonaha si jawaabta laguugu sheego.
Telefoonka koroonuhu waa: 21 80 21 82
Halkan waxaad samayn kartaa:
in aad baaritaan ballansato
in lagu siiyo talo iyo warbixin koroonaha ku saabsan
in lagu siiyo warbixinta tallaalka koroonaha (riix 3 haddii aad qabto su’aal la xiriirta tallaalka)
Afkaaga hooyo ayaa lagugu caawin karaa. Haddii aad isku aragto astaamaha marinnada hawada oo halis ah, wac dhakhtarkaaga joogtada ah. Haddii aad heli weydo dhakhtarka joogtada ah islamarkaana aad caawin degdeg ah u baahan tahay – markaas dhakhtarka kaltanka leh ka wac 116117. Haddii uu jiro xanuun ay naftu khatar ku jirto, wac 113.
Isniin – jimce: 08:30 - 15:00
Sabti - axad: 09:00 - 15:00
Tallaalku wuxuu difaacaa in koroonaha aad loogu xanuunsado
Tallaalku waa bilaash, waana ammaan. Dadkoo dhan ayaa lagula talinayaa, xataa kuwa ka midka ah kooxaha khatarta gaarka ah ku jira.
Waxyeellooyinka danbe ee uu keeno waa kuwo fudud oo ayaguna dhammaada maalmo yar kaddib. Marka la gaaro wakhtigi lagu tallaali lahaa degmadaada ayaa kula soo xiriiraysa si ballan laguugu qabto. Goobgta tallaalka iskama imaan kartid adigoo aan ballan lahayn.
Xusuuso in aad meesha lagaa helo ku qorto bogga norge.no/oppdater-kontaktinformasjon
Haddii uu koroone kugu dhacay waa in aan ogaannaa dadkii aad la xiriirtay maalmihii ugu danbeeyay. Si looga hortago in ay dad kale cudurka u sii qaadaan.
Waxaan la xiriiraynaa dhammaan dadkii aad kulanteen ama aad u dhowaatay. Dadkaas looma sheegayo cidda laga yaabo in ay cudurka ka qaadeen. Dadka lala xiriiro waa in ay galaan 10 maalmood oo karantiil ah kuwaas oo ka billaabanaya maalintii ay is arkeen qofka cudurka qaba. Waana in koroone laga baaro.
Corona information - step by step
Macluumad ku saabsan korona-tallaabo tallaabo (PDF 0,8MB)
Halkan waxaad ka heli karta macluumaad ku sabaasan korona oo si fudud loo sharraxay. Uisticmaal taageerada isgaarsiinta ama si aad wax uga bartid caabuqa korona,infekshinka,xakamenta infekshinka,tallaalka iyo siido kale caafimaadka maskaxda.
Video about quarantine and isolation from Norwegian Institute of Public Health | Select your preferred language.
Somali: Corona testing is free (PDF 0,1MB)
Somali: Pandemic prevention (PDF 0,1MB)
Somali: Keep a distance of at least one metre (PDF 0,1MB)
Somali: Public transport and face mask (PDF 0,1MB)
Somali: Cartoon about quarantine guidelines (JPG 0,1MB)
Somali: Cartoon about isolation guidelines (JPG 0,1MB)
Images for infoscreens
Somali: Pandemic prevention (JPG 1MB)
Information sheets about coronavirus from The Norwegian Institute of Public Health | Select your preferred language.
Information sheets on home quarantine and isolation from The Norwegian Institute of Public Health | Select your preferred language.